August 23, 2020 adminLeaveaComment on घर फर्कने नेपालीको ख`र्च ६३ हजार देखि ३ लाख सम्म……हेर्नुहोस् ।
ऋ`ण काढेर वैदेशिक रोज`गारीमा गएका श्रमिकलाई संक`टका वेला स्वदेश ल्याउँदा थप आ`र्थिक मा`रमा पार्ने नीति सरकारले अ`ख्तियार गरेको छ । महँगो हवाई भा`डा तिरेका उनीहरूले आउँदा अनि`वार्य पिसिआर परीक्ष`णको रि`पोर्ट ल्याउनुपर्ने र काठमाडौं आइसकेपछि तोकिएका होटेलमा सात दिन बस्नुपर्ने सरकारको नि`र्णय छ । विदेशबाट घर पुगुन्जेलसम्म एकजनाको कम्तीका ६३ हजार ६ सयदेखि तीन लाख २२ हजारसम्म ख`र्च हुन्छ ।,
विदेशबाट फर्किनेहरू बस्नका लागि सरकारले शुक्रबार होटेल र भा`डादर सार्वज`निक गरेको छ । पर्यटन वि`भागको समन्व`यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले साना तथा म`झौलादेखि तारे होटेलसम्म तो`केको छ । जहाँ सात दिन बस्दा एकजनाले कम्तीमा १० हजार पाँच सयदेखि ६३ हजारसम्म ख`र्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सात दिन होटेलमा बसेपछि पिसिआर परीक्ष`णमा नेगेटिभ रिपोर्ट आए मात्रै उनीहरू घर जान पाउनेछन् ।,
स्वदेश फर्कन हवाई भा`डामा देशअनुसार १९ हजार आठ सयदेखि एक लाख ९३ हजार आठ सयसम्म तिर्नुपर्छ । सबैभन्दा सस्तो हवाई भाडा बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट र सबैभन्दा महँ`गो अस्ट्रेलियाबाट काठमाडौं आउँदाको छ । तर, अधि`कांश श्रमिक खा`डी मुलुकहरूबाट आउने भएकाले न्यू`नतम ख`र्च पनि बढी हुन्छ । खाडी मुलुकबाट आउन कम्तिमा पनि ४४ हजार एक सय हवाई भाडा ति`र्नुपर्छ । म`हामा`रीका वेला एयरलाइन्सहरूले अरू वेलाको भन्दा म`हँगो शुल्कमा टि`कट बेचिरहेका छन्।,
विदेशबाट आउँदा अनि`वार्य पिसिआर परीक्ष`णको रिपो`र्ट ल्याउनुपर्ने व्यव`स्था सरकारले गरेको छ । जसका लागि देशअनुसार सातदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म ख`र्च हुन्छ । त्यस्तै, काठमाडौंबाट गृहजिल्ला फर्कन पनि आफैँले ख`र्च व्यहो`र्नुपर्नेछ । एकैठाउँमा जाने व्यक्ति धेरै नहुने भएकाले महँ`गो शु`ल्कमा साना गाडी रिजर्भमा लैजानुपर्ने हुन सक्छ । अहिले साना गाडीले काठमाडौंदेखि धनगढीसम्म पुर्याएको ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । सातजना अटाउने गाडीमा समूहमा जाँदा पनि एकजनाको भागमा सात हजार पर्न आउँछ ।,त्यस्तै, छोटो दू`रीका स्थानमा जाँदा पनि साना गाडीले १५ हजारसम्म लिने गर्छन् । समूहमा जाँदा पनि एकजनाले दुई हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाटोख`र्च छुट्टै हुनेछ ।,
सरकारले सार्वजनिक गरेको दररेटअनुसार साना तथा मझौ`ला होटेलमा सिंगल कोठा लिएर बस्दा एकजनाले प्रतिदिन एक हजार आठ सय तिर्नुपर्नेछ । एउटा कोठामा दुईजना बस्दा भने प्रतिव्य`क्ति एक हजार पाँच सय तो`किएको छ । त्यस्तै, पर्य`टकस्तरीय होटेलमा सिंगल कोठामा बस्दा दुई हजार आठ सय र दुईजना बसे प्रतिव्यक्ति एक हजार आठ सय ति`र्नुपर्नेछ । एकतारे होटेलमा सिंगल कोठाको चार हजार र दुईजना बस्दा प्रतिव्य`क्ति दुई हजार पाँच सय, दुईतारे होटेलको सिंगल कोठाको पाँच हजार र दुईजनाका लागि प्रतिव्य`क्ति तीन हजार पाँच सय तथा तीनतारे होटेलमा एकजनाका लागि ६ हजार र दुईजना बस्दा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार ति`र्नुपर्नेछ ।,
त्यस्तै, चारतारे होटेलमा एकजनाका लागि आठ हजार र दुईजना बस्दा प्रतिव्य`क्ति पाँच हजार पाँच सय तथा पाँचतारे होटेलमा सिंगल कोठा लिँदा नौ हजार र दुईजना बस्दा प्रतिव्यक्ति ६ हजार तो`किएको छ । यसमा ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर समा`वेश गरिएको छ । तो`किएको रकममा शाका`हारी खाना उप`लब्ध हुनेछ भने ब्रेकफास्टको परिकार प्रत्येक दिन फरक हुनेछ ।,
तोकिएका होटेलहरूमा तीन हजार पाँच सय व्यक्ति अट्ने क्ष`मता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल, ताहाचल, गौशाला, बत्तिसपुतली, दरबारमार्ग, सानो गौचरन, नक्साल, भक्तपुर, लाजिम्पाट, गोदावरी, कमलादी, स्वयम्भू, झम्सिखेल, बुढानीलकण्ठ, लैनचौर, कमलपोखरी र बागबजार क्षेत्रका होटेल बस्नका लागि छ`नोट गरिएका छन् ।,
सरकारको नि`र्णय सुनेर विदेशमा अल`पत्र परेका श्र`मिक थप आत्ति`एका छन् । जा`गिर गुमा`एर चार–पाँच महिनादेखि बेख`र्ची बनेका आफूहरूले स्वदेश पुगेर होटेल क्वा`रेन्टिनको ख`र्च तिर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । तीन महिनादेखि बेरोज`गार छु । घर फर्किन टि`कट का`ट्न पनि मुस्किलले पैसा जुटा`एको छु । फेरि नेपाल आएर पनि होटेलमा पैसा ति`रेर बस्न सक्ने मेरो क्ष`मता छैन । च`र्को मूल्य तिरेर म कसरी बसुँला रु कतारको दोहामा रहेका रमेश परियारले फोनमा भने । घर फर्किने तयारीमा रहेका उनले सरकारले नि,शुल्क क्वा`रेन्टिनको व्य`वस्था गर्नुपर्ने बताए ।,
दुबईमा अ`ल`प`त्र परेका विनोद दर्जी र मलेसियामा रहेका बिरु नेपालीले पनि उस्तै पी`डा सुनाए । कम्पनी ब`न्द भएर पाँच महिनादेखि बेरो’जगार छु । यहाँ खानेसमेत पैसा छैन । टिकट काट्न पनि घरबाट पैसा मा`ग्नुपरेको छ । यस्तो वेला होटेलमा बसेर पैसा तिर्ने क्ष`मता छैन म सँग, विनोदले भने ।,बिरुले काम गरिरहेको कम्पनीले चार महिनादेखि त`लब नदिएकाले बेख`र्ची रहेको बताए । उ`द्धारको नाममा सरकारले पैसा असु`लिरहेको भन्दै उनले आ’क्रोश व्य`क्त गरे । कम्प`नीले त`लब नै नदिएको चार महिना भइसक्यो । सरकारले उ`द्धार गर्ने भनेको त पैसा असु`ल्ने पो रहेछ । कहाँबाट ल्याउने होटेलमा बस्ने पैसा ? उनले भने ।,
सिसिएमसीका संयो`जक महेन्द्र गुरागाईंले भने बाहिरबाट आउने नेपालीलाई बढीभन्दा बढी सुर`क्षित राख्न होटेल क्वारेन्टिनको व्यव`स्था गरिएको बताए । बाहिरबाट आउने नेपालीलाई धेरैभन्दा धेरै सुर`क्षित राख्न होटेल क्वारे`न्टिनको व्यव`स्था गरिएको हो । उनीहरूको पिसिआर परी`क्षण गराएर घर पठाउने यो`जना हो । वि`गतमा यो प्रभा`वकारी हुन सकेन, अब भने कडाइका साथ कार्या`न्वयन गर्न खोजेका छौँ, उनले भने ।,
ख`र्च व्य`होर्न नसक्नेलाई सरकारी क्वारे`न्टिनमा राखिने गुरागाईंले बताए । उपत्यकामा चाँडै क्वारे`न्टिन व्यवस्थापन पनि गरिने उनको भनाइ छ । होटेल क्वारे`न्टिनको ख`र्च व्य`होर्न नसक्नेहरूलाई सरकारी क्वारे`न्टिनमा राख्ने यो`जना छ । कतिपय क्वारे`न्टिन केही दिनमै त्यस्तै, चारतारे होटेलमा एकजनाका लागि आठ हजार र दुईजना बस्दा प्रतिव्य`क्ति पाँच हजार पाँच सय तथा पाँचतारे होटेलमा सिंगल कोठा लिँदा नौ हजार र दुईजना बस्दा प्रतिव्यक्ति ६ हजार तो`किएको छ । यसमा ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर समा`वेश गरिएको छ । तोकिएको रक`ममा शाका`हा`री खाना उपलब्ध हुनेछ भने ब्रेकफास्टको परिकार प्रत्येक दिन फरक हुनेछ ।,
तोकिएका होटेलहरूमा तीन हजार पाँच सय व्यक्ति अ`ट्ने क्ष`मता रहेको जिल्ला प्रशा`सन कार्यालयले जनाएको छ । पर्य`टकीय क्षेत्र ठमेल, ताहाचल, गौशाला, बत्तिसपुतली, दरबारमार्ग, सानो गौचरन, नक्साल, भक्तपुर, लाजिम्पाट, गोदावरी, कमलादी, स्वयम्भू, झम्सिखेल, बुढानीलकण्ठ, लैनचौर, कमलपोखरी र बागबजार क्षेत्रका होटेल बस्नका लागि छनो`ट गरिएका छन् ।,
सरकारको निर्णय सुनेर विदेशमा अल`पत्र परेका श्र`मिक थप आत्ति`एका छन् । जा`गिर गुमा`एर चार–पाँच महिनादेखि बेख`र्ची बनेका आफूहरूले स्वदेश पुगेर होटेल क्वारे`न्टिनको ख`र्च तिर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । तीन महिनादेखि बेरो`जगार छु । घर फर्किन टि`कट काट्न पनि मुस्किलले पैसा जुटा`एको छु । फेरि नेपाल आएर पनि होटेलमा पैसा तिरेर बस्न सक्ने मेरो क्षम`ता छैन । चर्को मूल्य तिरेर म कसरी बसुँला रु कतारको दोहामा रहेका रमेश परियारले फोनमा भने । घर फर्किने तयारीमा रहेका उनले सरकारले नि,शुल्क क्वारेन्टिनको व्य`वस्था गर्नुपर्ने बताए ।,
दुबईमा अ`लपत्र परेका विनोद दर्जी र मलेसियामा रहेका बिरु नेपालीले पनि उस्तै पी`डा सुनाए । कम्प`नी बन्द भएर पाँच महिनादेखि बेरो’जगार छु । यहाँ खानेसमेत पैसा छैन । टिकट का`ट्न पनि घरबाट पैसा माग्नुपरेको छ । यस्तो वेला होटेलमा बसेर पैसा तिर्ने क्षम`ता छैन म सँग, विनोदले भने ।,
बिरुले काम गरिरहेको कम्पनीले चार महिनादेखि तल`ब नदिएकाले बेख`र्ची रहेको बताए । उद्धारको नाममा सरकारले पैसा असु`लिरहेको भन्दै उनले आ’क्रोश व्य`क्त गरे । कम्पनीले तल`ब नै नदिएको चार महिना भइसक्यो । सरकारले उद्धा`र गर्ने भनेको त पैसा असु`ल्ने पो रहेछ । कहाँबाट ल्याउने होटेलमा बस्ने पैसा ? उनले भने ।,
सिसिएमसीका संयो`जक महेन्द्र गुरागाईंले भने बाहिरबाट आउने नेपालीलाई बढीभन्दा बढी सुरक्षित राख्न होटेल क्वारेन्टिनको व्यव`स्था गरिएको बताए । बाहिरबाट आउने नेपालीलाई धेरैभन्दा धेरै सुरक्षित राख्न होटेल क्वा`रेन्टिनको व्यव`स्था गरिएको हो । उनीहरूको पिसिआर परीक्ष`ण गराएर घर पठाउने योज`ना हो । विगतमा यो प्रभा`वकारी हुन सकेन, अब भने कडाइका साथ कार्या`न्वयन गर्न खोजेका छौँ, उनले भने ।,
ख`र्च व्य`होर्न नसक्नेलाई सरकारी क्वारे`न्टिनमा राखिने गुरागाईंले बताए । उपत्यकामा चाँडै क्वारेन्टिन व्यव`स्थापन पनि गरिने उनको भनाइ छ । होटेल क्वारे`न्टिनको ख`र्च व्यहो`र्न नसक्नेहरूलाई सरकारी क्वारे`न्टिनमा राख्ने यो`जना छ । कतिपय क्वा`रेन्टिन केही दिनमै तयार हुँदै छन् । राधास्वामी अर्गनाइजेसनले अहिले पनि राखिरहेको छ । विदे`शबाट एकैदिन धेरै नआउने भएकाले क्रमश, व्यव`स्थित गर्दै जान्छौँ, उनले भने ।,
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमातहत रहेको कल्या`णकारी कोषको रकमबाट कामदार ल्याउने विषयमा एउटा नि`श्चित मापद`ण्ड बनाइएको र त्यसभित्र पर्नेलाई त्यही रकम ख`र्च गरेर ल्याउने गुरागाईले बताए । तर, सबैको ह`कमा त्यो व्य`वस्था ला`गू नहुने उनको भनाई छ ।,होटेल संघ नेपाल हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारको आ`ग्रहमा स`स्तोमा होटेल क्वारेन्टिनको व्यव`स्था गरिदिएको बताए । सरकारले भनेजस्तै गरी हामीले सस्तोमा होटेलको व्य`वस्था गरिदिएका छौँ ।
वि`गतमा पनि भनिएको यस्तै थियो, तर बाहिरबाट आएका अधिकां`शले बस्न नमानेको अवस्था थियो । कति जना जागिर गएर बेख’र्ची भएर आएका छन् । उनीहरू सबै होटेलमा बस्छन् जस्तो लाग्दैन, उनले भने, हामीले स्वास्थ्य प्रो`टोकलमा एकदमै ध्यान दिएका छौँ । दिनमा चार समय खाना–खाजाको व्यव`स्था गर्छौँ ।,हानका अनुसार जेठ ३२ यता झन्डै ५२ हजार नेपाली विदे`शबाट आए पनि दुई हजार मात्रै होटेल क्वारेन्टिनमा बसेका छन् । प्रत्येक दिन विदेशबाट पाँच सयजनालाई ल्याउने सरकारको यो`जना छ ।
“नयाँ पत्रिकामा खबर छ”